baradhada hore - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda baradhada hore
Calaamadda: baradhada hore
Dagestan, waxay filayaan inay helaan goosasho baradho ah oo aad u horeeysa
Beerista baradhada waxaa lagu dhaqmaa ku dhawaad ​​degmo kasta oo Dagestan ah. Sanadkan, waxaa la qorsheeyay in lagu beero baradhada jamhuuriyadda...
Switzerland waxay ansixisay fikradda baradhada hore ee 2022
Wakiilada waaxda baradhada Swiss iyo ganacsiga tafaariiqda ayaa ansixiyay fikradda baradhada hore ee 2022. Waxay lagama maarmaan u tahay qorsheynta sahayda iyo ...
Dhalinyarada baradhada ka baxda koonfurta Ukraine ma iibin karaan dalagyadooda
Tan waxaa lagu sheegay fariinta Yukreeniyaan Mashruuca Hormarinta Dhaqaalaha ee UHBDP. “Haddii dhowr maalmood ka hor iibiyeyaashu ay baradho ku iibsadeen 5 UAH, ...
Baradhadu iyo xididdo aad bay u dhaceen
Kadib kor u kac aad u sareeya oo ku yimid qiimaha khudaarta "borscht set", soo saarayaasha ayaa bilaabay inay hoos u dhacaan - dalag cusub ayaa bilaabay inuu yimaado. Si kastaba ha noqotee, aagga degitaanka ...
Beeraleyda ayaa filaya hoos u dhac ku yimaada qiimaha baradhada
Qiimaha ugu sarreeya ee baradhada Ruushka ayaa la dhaafay usbuucii hore, hadda waxaa jira hoos u dhac ku yimid qiimaha jumlada ee beeraleyda, iyo ...
Beeraleyda Armenia waxay goostaan ​​dalaggii ugu horreeyay ee baradhada dhalinyarada ah
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad tan u sameyso, wax badan ayaad kasban kartaa. Khiyaanooyin noocee ah ayaad leedahay si aad uga hor marto tartamayaashaada, ayuu yiri wariyaha "MIR 24" ...
Uzbekistan: baradhada hore waxay suuqa ka soo muuqatay sedex todobaad ka hor waxayna si xawli ah qiimo ugu dhaceysaa
Dhowr toddobaad hadda, macaamiisha Uzbekistan waxay awoodeen inay cunaan baradhada goosashada hore, taas oo ku dhowaad saddex toddobaad ka hor celcelis ahaan ...
Khubarada EastFruit waxay fiiro gaar ah uyeelanayaan suuragalnimada sare ee luminta qayb muhiim ah oo kamid ah dalaggii hore ee baradhada ee Tajikistan. Beerista baradho hore inbadan ...
Sida laga soo xigtay East-Fruit, usbuucii la soo dhaafay qiimaha baradhada ayaa hoos ugu dhacay meel walba, marka laga reebo Moldova, halka xaaladda suuqa ...